Ra’iisul wasaare Kheyre oo kullan deg-deg ah maanta shir guddoomiyay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo kullan deg-deg ah maanta shir guddoomiyay (DHAGEYSO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta shir guddoomiyay kullan deg-deg ah oo uu maamulka gobolka Banaadir ku yeeshay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho.
Kullankaasi oo looga hadlay arrimaha amniga, nadaafadda degmooyinka gobolka Banaadir iyo weerarkii shalay ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale goob-joog ka ahaa wasiirka amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow (Ducaale), dhammaan mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo taliyeyaasha hay’adaha amniga dalka.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo kullankaasi ka hadlay ayaa taliyeyaasha hay’adaha amniga iyo mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir kala hadlay dar-dar gelinta amniga iyo sidii looga hortagi lahaa weerarada iyo qaraxyada kaga imaanaya dagaalyahanadda Al-shabaab.
Kullankaan ayaa yimid kadib weerarkii ay dagaalyahanadda Al-shabaab shalay ku qaadeen xarunta degmada Wadjair ee magaalada Muqdisho, waxaana weerarkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa ku wargeliyay saraakiisha amniga inaan marnaba loo dulqaadan doonin weerarada ay Al-shabaab caadeysatay inay ku laayaan shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna saraakiishaasi ku amray inay ka hortagaan weeraradaasi iyo in dib loo furo wadooyinka maadaama ay dhibaato kusii kordhinayaan shacabka.
Kullanka ayaa kusoo gaba-gaboobay jawi degan, waxaana qodobadii kullanka kasoo baxay warbaahinta uga warbixiyay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane.